Lesi sihloko osesikhundleni “Ukuthenga kube kuhle: nesishiyagalolunye izipho kokukubuyisela” lalotshwa Katharine Gammon, ngoba theguardian.com ngoMgqibelo lama-20 Disemba 2014 12.30 UTC
Inkathi of ukupha lapha. Kodwa zonke izipho - kanye namakhadi, kwemibhalo, izihlahla, travel, imihlobiso, ukudla neziphuzo - ahlotshaniswa noKhisimusi zinengxenye kule planethi futhi abantu bayo.
A 2007 Ukutadisha kusukela York University, ngokwesibonelo, Ucwaningo luthole ukuthi umthengi isilinganiso British kudala mayelana 1,433lb (650kg) kwe-carbon-isikhutha esiphumela emoyeni phezu kwalezo zinsuku ezintathu yemikhosi kaKhisimusi. Futhi 2008 umbiko, uprofesa WeNkosi College Raymond Bryant esibizwa Christmas "wonyaka izinhlekelele zemvelo kunazo zonke" (PDF).
Uma ubhekene saphela iholide lakho yezitolo (noma nje ukuqalisa), akusiwona sekwephuze kakhulu uma izama ukulungisa umonakalo. Nazi eziyisishiyagalolunye ngamapiki izipho enza okuhle:
amapaki National kudlule
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukupha okuhlangenwe nakho kwakha ubuhlobo elinamandla kumuntu kunokubukela i kunikela ngalokutsite ezibonakalayo - futhi akukho isipiliyoni obukhulu kunobukaJohane ngaphandle omkhulu. A unyaka federal ukuzilibazisa pass izibonelelo ukungena ezingaphezu kuka 2,000 amapaki enarheni mazombe, kusukela mlilo Hawaiian kuya Florida Everglades. Kuphinde kube indlela enhle kakhulu ukusekela emazweni zomphakathi. Njengoba ibhonasi, kudlule abanikazi angaletha kanye nabantu abadala abathathu mahhala. Price: $80; $10 ngabantu abadala
Sevenly kaButhelezi $7 kuzo zonke izinhlobo umkhiqizo zokunikela. Photograph: Sevenly
isembatho Sevenly nezinye izinsimbi
Sevenly sika safike uya ku: $7 kuzo zonke izinhlobo nto ithengiswe – kungaba $26 tee noma cool isiliva elengayo umgexo – Ufika akhishwa phakathi injongo enhle. Okwamanje, yakho $7 iya ukuthenga izimpahla esikoleni kanye nemikhiqizo kwenhlanzeko izingane eziyizisulu zobuphekula, Le Nkinga Syrian and Isis. Yenkampani kakade yaphakamisa ezingaphezu kuka $ 4M inkongozelo kuze kube yimanje. It Ubuye CEO ngaphansi 30. Price: $7 ukuze 130
TerraPass chocolate iza nazo carbon izinciphiso. Photograph: TerraPass
Looking for a uswidi chocolate elwa abhekane nokushintsha kwesimo sezulu? TerraPass ufuna ukukusiza out. Its Festive Umqulu chocolate bar iza nazo 10,000lbs (4,535kg) of carbon offset - okulingana ekungeniseni imoto nomgibeli emgwaqeni, noma nokuhafula phakathi Ithekhniki ukusetshenziswa kukagesi ube ikhaya sika, unyaka owodwa. The credits carbon ukusekela methane bamba futhi ivuselelwe-energy amaphrojekthi. Lona kwencazelo chocolate wecala-free. Price: $60
Imali Project Akola, okuyinto udayisa izesekeli ezenziwa ngabesifazane base-Uganda, kuthiwa elithekelisiwe kuceceshwa nekucashwa izinhlelo. Photograph: Akola
Akola Project ubucwebe kanye izesekeli
Leli qoqo ngezandla iye acatshangelwe abesifazane eceleni Uganda. Indlela yokusebenza kwebhizinisi kuhlanganisa lokuqeqeshela amakhono ukuqeqeshwa enikeza emisebenzi kubantu besifazane abaneminyaka abaphila negciwane lesandulela ngculaza kanye labebakhonta ubulili sengishushunjiselwe. Izinzuzo yenkampani 100% of uqhubekela phambili inetha imizamo yokunikeza amandla abesifazane e-Uganda, ngokusebenzisa kuceceshwa nekucashwa. izingcezu, ayenziwa ngesikhumba izinkomo uphondo isandla cast metal Ethiopian, nazo ngokuphelele amahle. Price: kusukela $35
L. Amakhondomu unikeza ikhondomu i at-engozini umuntu ngoba yilowo nalowo kini ukuthenga. Photograph: L. Amakhondomu
Abantu abaningi bajwayelene "thoyizi, inikeze lowo "model yawenza by Toms Shoes. Manje lo mbono linwetshelwe ku amakhondomu. Kwadalwa abantu besifazane ngendlela esimeme kuvuna, high-grade latex yemvelo, lezi rubbers ayatholakala inthanethi in uhla izitayela bujabulise. Le nkampani futhi usebenza e-Afrika kanye nezinhlelo ibhizinisi social female-run ukuthi lokusakaza lo amakhondomu anomthelela ezindaweni futhi basebenze nabafundi ukuze uthole amakhondomu ezandleni zalabo abadinga them. In the US, L Amakhondomu lizama ukwenza amakhondomu sexier futhi ikuyo yonke more. Lize inikeza ihora elilodwa ukulethwa ikhondomu service in San Francisco, EBrooklyn Manhattan. Price: kusukela $15 okupakisha
izinhlelo ezolimo Community-asekelwa abahambisele nokudla fresh iqonde kusuka emapulazini asendaweni. Photograph: Wikipedia
A subscription epulazini "share" kusuka CSA neqembu lendawo (ezolimo umphakathi ezisekelwa) kuyinto izipho eziphelele zokudla noma amantongomane impilo. Ukunikeza isipho okumnandi, ukudla, inyama noma ubisi bese usekele abalimi bendawo in the ukuhlabana. Thenga azungeze ukuhlola amanani nobukhulu epulazini amabhokisi - CSAs more zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela izinyanda amancane kulo nyaka kunanini ngaphambili - futhi uhlole for epulazini imizamo nazo emphakathini ngamakhasimende. Lokhu CSA Idaho-based, ngokwesibonelo, sponsors amaphrojekthi yezolimo by ababaleki. Thola i-CSA in yakho (noma umngane wakho) ezingomakhelwane at JustFood.org.
izimpahla Homeboy Industries 'nezitini, ezifana granola yayo orange cranberry, zenziwa elinye iqembu lezigelekeqe zangaphambili. Photograph: Homeboy Industries
izimpahla Homeboy Industries wabhaka
Kumuntu izinyo elimnandi, hlola out la ehla, eyenziwe labapheki eziye zinikwe ithuba lesibili. Los Angeles-based Homeboy Industries kuyinto ezigelekeqe kokungenela kunayo yonke emhlabeni, reentry kanye Uhlelo Rehab. Amalungu emakhishini isitimela bese mentor ex-gang Inhlangano ukuze usebenze lapho upheka ukudla. abangamaphesenti angu angamashumi ayisikhombisa abantu abangena sokuhlumelelisa isimilo ezingu-18 Homeboy BakaJehova bagcina kokuqeda nge izinhlelo zokufundisa amakhono okuziphilisa, zemibhalo ehlobene kanye no- irekhodi elisha. Price: kusukela $8
Sseko Designs izesekeli, esinjengalesi handwoven Wanderlust itshali e Ethiopia, ukusiza ukufundisa abesifazane e-Afrika. Photograph: sseko
Ethical fashion brand Sseko waqala ukuphuma njengoba inkampani wembadada - futhi indlela ukuqasha abesifazane base-Uganda ubasize uthole imali kwezemfundo zabo. Kuleminyaka emihlanu edlule, zonke iziqu iprogramme Sseko sika usephendukele ekolishi. Le nkampani, uye wanda kakhulu eMpumalanga Afrika, lapho scarves zalo esandleni nokwelukiweyo by ababazi abakhokhelwayo amaholo fair. (esitolo Sseko sika-intanethi unezinhloso ezinye izikhwama lovely, kakhulu.) Price: kusukela $33
I Keys Ukupha iqasha abantu abafuna ukwedlulisela kusukela ukungabi namakhaya ukwenza izinto ezinjalo zokuhloba njengoba Isongo Never Ending. Photograph: The Keys Ukupha
Ukuphana Keys ubucwebe
I Ukupha Keys Umsunguli, umculi / songwriter Caitlin Crosby, waqaphela angahle abe ebhizinisini engafanele ngesikhathi esetshenziswa-key imigexo azenzela for amakhonsathi wakhe wadayisa lingcono kunamafutha CD yakhe. Yena libhalwe endala, okhiye esetshenziswa ngamazwi ugqozi futhi amazwi abantu ukugqoka futhi adlulele nabathandekayo babo. I nomqondo wokunikeza izinto ezindala impilo entsha futhi "ukusigcwalisa phambili" ekugcineni waphefumulela inkampani ukuba siqashe abantu abangaphansi looking ukwedlulisela kusuka bangabi namakhaya. Price: kusukela $38
Katharine Gammon is a intatheli ezinze Santa Monica, bebhala innovation, isayensi nobuchwepheshe.
The Vital Signs platform usekelwa Avery Dennison, Domtar futhi Chiquita. Konke okuqukethwe yokuhleleka ezimele ngaphandle yizicucu abhalwe "kwaletha kuwe by". Thola ulwazi oluthe xaxa lapha.
← Thumela Previous Izinyoni Better Than Izangoma zezulu zinga- Abantu [VIDEO] →